I-Airedale Terrier - Yini Ongayilindela Kulenja Yezinja - Izinhlobo
Ama-airedales enza kahle ekudleni kwezinja ezisezingeni eliphakeme.
I-Valley of the Aire eWest Riding, eYorkshire, kwakuyindawo okwazalelwa kuyo i-Airedale Terrier. Usuku oluqondile alwaziwa kepha izinkomba zithi lolu hlobo lwaqala ukwenziwa maphakathi nekhulu leshumi nesishiyagalolunye. Bazalwa njengempendulo kubasebenzi abasezingeni eliphakathi basefemini abafisa ukuzingela i-otter. Ukuzingela lo mdlalo kudinga iphakethe lama-Otterhounds kanye ne- 'Terrier' noma amabili.
I-Airedale kukholakala ukuthi iyi- “Old English Black-and-Tan Terrier,” i- “Broken-coated Working Terrier” kanye ne- “Rough-coated Black-and-Tan Terrier” edlulele e-Otter Hound phakathi kwabanye. Onke ama-akhawunti 'endalo' yephuzu lokuwela okungenzeka nge-Border Collie noma enye inja yezimvu. Amanye ama-akhawunti akhomba nakuBull Terrier, kuyilapho amanye ephikelela ngokuthi lokhu kuphumela ngaphandle akukaze kwenzeke.
Lezi zinja zazaziwa ngekhono lazo elinamandla lokuthatha noma yisiphi isitha futhi zinikeze umlando omuhle wazo. Bephulwe izibhamu futhi baqeqeshelwa ukubuyisa. Babengabancintisani abanolaka emidlalweni yezilinganiso zamanzi.
U-Albert Payson Terhune uyifingqa ngamafuphi i-Airedale: “Phakathi kwemigodi yezimayini ze-Aire, amaqembu ahlukahlukene abavukuzi ngamunye ngamunye wayefuna ukwakha inja eyayizokwazi ukugqokisa futhi idlise futhi IKHUMBUZE inja yomunye wabavukuzi. Kwezi zivivinyo kwavela i-Airedale yesimanje. Uyashesha, uyesabeka, unomusa, unengqondo enkulu, u-chum ofanele nonogada. Cishe akukho lutho angeke alufundiswe uma umqeqeshi wakhe enesiphiwo esincane sokufundisa. Yonke intshi yakhe iyasetshenziswa. Ayikho imikhiqizo ye-flabby. umshini ophelele- umshini onobuchopho, kanye. ”
U-Airedale wokuqala owaziwa ukuza eMelika nguBruce owalethwa nguC. H. Mason. UBruce wayeyinduna kaBess, owayeyidamu lika-Airedale Jerry, impande yesihlahla somndeni.
Ama-airedales asebenze ngempumelelo yonke into kusukela ekuzingeleni umdlalo omkhulu, ukuzingela ama-coon, ukuba yizinja ezinhle kakhulu zamaphoyisa ukuya emsebenzini wokulalela. Akuwona wonke ama-Airedale ahamba phambili kuyo yonke indawo, kepha ngokuhamba kwesikhathi abaningi benze imisebenzi ehlukahlukene kahle kakhulu.
Namuhla ama-Airedales asasetshenziswa njengezinja zokuzingela, izinja zokubuka, ngisho nezinja ezilalelayo nezishesha, kepha, ngokuyinhloko, bangabangane abathembekile, abathembekile nabajabulisayo.
Ama-airedales enza kahle ekudleni kwekhwalithi ephezulu. Eminye ingahle ibe nesikhumba esomile 'esomile' futhi ingangezelelwa ngamafutha athile ne-kelp. Futhi ama-Airedales amaningi aphendula kahle ekudleni kwewundlu nelayisi.
Into eyodwa okufanele ishiwo lapha ukuthi ungondla isikhathi esingakanani ukudla komdlwane. Olunye ucwaningo lukhombisa ukuthi ukondla imidlwane isikhathi eside kakhulu kungakhuphula izehlakalo ze-hip dysplasia ezinjeni ezingakuthola. Umbono uthi iphesenti eliphakeme lamaprotheni atholakala kumafomula we-puppy angasheshisa ukukhula ngaphambi kokuba amathambo asathuthuka akwazi ukuxhasa isisindo. Abanye abalimi baqala ukondla ukudla kwabantu abadala kusenesikhathi. Iningi labantu livame ukushintshela kancane kancane ekudleni kwabantu abadala ezinyangeni eziyi-8-10. Futhi, lokhu kuyinto okufanele uxoxe ngayo nomfuyi nodokotela wezilwane wakho.
Iningi lama-Airedales ezifuywayo lifinyelelwe ekubukekeni kwesici seKing of Terriers. Umkhwenyana omuhle kufanele akwazi ukuhlinzeka ngale nsizakalo. Uma kungenjalo, xhumana nomfuyi endaweni yangakini, abaningi bazovuma ukuhlinzeka ngosizo lokuzilungisa ngesilinganiso esilinganiselwe. Ama-airedales kufanele abhulashiwe nge-pin brush nsuku zonke ukususa izinwele ezifile, ngoba 'azichithi'. Ukuxegisa impahla yabo (izinwele zomlenze nezinwele zobuso) kuzosusa nezinwele ezifile, kuvumele izinwele ezintsha ukuthi zikhule.
Ama-airedales 'ashaya' ijazi lawo uma livunyelwe ukuthi likhule.
Izinja ezizokhonjiswa ziyaphuculwa futhi ziyagundwa. Lokhu kuchazwe ezincwadini ezimbalwa ekugcineni kwale FAQ. Kungumsebenzi odla isikhathi esiningi nobuciko obuthile okunzima ukubazi.
Ama-airedales ancamela ukuba nemindeni yawo kepha futhi athanda ukugingqa nokudlala. Indawo ebiyelweyo ilungele ukuzivocavoca nokudlala, ngenkathi ngemuva kokudlala, bakulungele ukwenza izinja ezinkulu zasendlini.
Ama-airedales athanda ukumba. Ngempela bangama-terre-iers. Hlala ukhumbula lokho lapho ulungiselela indawo yokuzivocavoca.
Ukuqeqeshwa kwekreyithi kungumbono omuhle wenja encane. Njengoba ekhula angajwayela ukusebenzisa lokhu 'njengomhume' wakhe futhi unendawo ephephile yokuhamba noma izinsuku zakho ezinde emsebenzini.
Ama-airedales izinja ezikhuthele kakhulu futhi adinga ukuzivocavoca umzimba okuningi. Badinga indawo enkulu ngokwanele yokuganga nokudlala. Ukuhamba kwansuku zonke kungukuzivocavoca okuhle nesikhathi sokuzijabulisa sobabili ne-Airedale yakho.
Ama-airedales athanda ukuba 'inja enobudlova,' okwenza ukuqeqeshwa komphakathi kanye nokulalela kube yimfuneko.
Njengakwezinye izinhlobo, qala ukuzihlanganisa ne-Airedale yakho usemncane. Ukuzijabulisa komphakathi kuzoqala ukubeka isisekelo somngane ojabule futhi olalelayo ngokwandisa ukuzethemba kwenja. Ama-airedales athanda ukuba 'inja enobudlova,' okwenza ukuqeqeshwa komphakathi kanye nokulalela kube yimfuneko. Inja yakho kufanele ikuhloniphe kepha kufanele uzuze leyo nhlonipho. Umdlwane wakho udinga isethi engaguquguquki yemithetho okufanele uphile ngayo. Isibonelo, uzovunyelwa kusofa noma cha? Imithetho engaguquguquki izokhiqiza umngane othembekile. Amakilasi amaPuppy, uma ekhona, angumbono omuhle.
Ama-airedales awaphenduli kahle ezindleleni ezinzima zokuqeqeshwa. Bafuna ukukujabulisa, kepha kufanele baqonde ukuthi yini elindeleke kubo.
Amacebo amaningi wokuqeqeshwa okuphumelelayo yilawa:
Ungayibophi inja yakho. Ama-airedales ngeke abe 'amarobhothi'. Uzoya kobuka isibukeli esithakazelisayo ngaphambi kokuphinda iphethini lesithende elifanayo 'elingenangqondo' kaninginingi.
Khumbula ukuthi ama-Airedales 'angongqondongqondo.' Ungababuzi ukuthi benze izinto eziwubuwula. Okuwukuphela kwesikhathi lapho intombazane yami endala yehla khona ngenxa yokuthi 'umuntu wejaji' wayeyisiphukuphuku ngokwanele sokubeka izinja elangeni ukuze ijaji likwazi ukuma emthunzini ngosuku olushisayo lwangoJulayi ntambama.
Sebenzisa isisusa esihle. Akukhathalekile ukuthi uzizwa ungasile kangakanani, kufanele azizwe sengathi uyakwenza ujabule. Yiba nobuciko. Khumbula, ama-Airedales angabacabangi, hhayi amarobhothi.
Sondela esimisweni ngasinye “sokuziqeqesha” njengethuba lokufunda kabanzi ngomngane wakho. Zama ukubheka umyalo ngamunye ngombono wenja yakho. Le ndlela yokucabanga izokhulisa ukuhloniphana okufanele kukhule ngenkathi kuqeqeshwa.
Khulisa amathuba akho okuphumelela ngokusebenzisana nabantu abakwazisayo futhi abakuqondayo ukuthinta. UNGAVUMELI noma yimuphi umuntu ofundisa ukulalela noma omunye umuntu ukuba aqhathanise i-Airedale yakho naleyo “mihle” yamaShelties, amaBorder kanye nama-GSD. Ngezwa indaba yowesifazane owayesebenza e-Airedale ekilasini lokulalela elalifundiswa ngumqeqeshi weBorder Collie. Ngesikhathi sekilasi elilodwa, bebesebenza emaphethini ezithende. Umqeqeshi ubematasatasa ekhomba ukungakwazi kuka-Airedale ukulandela iphethini njengoba uthisha noBorder Collie bewa begxumagxuma ngenkathi i-Airedale ibuka isendaweni ekahle phambi nje kweqa. Isilima “esiyisiphukuphuku” simane “samamatheka.”
Kufanele ube nezimo kakhulu lapho uqeqesha i-Airedale yakho. Lindela okungalindelekile futhi wazi umngane wakho. Ungazami ukufaka isikhonkwane esiyisikwele emgodini oyindilinga. Kungumqondo ophusile ovame kakhulu wokuthi ama-Airedales awakwazi ukuqeqeshwa. Ama-airedales adinga abaqeqeshi abanobuhlakani nababekezelayo.
Funa umfuyi onedumela elihle lapho ukhetha i-Airedale puppy yakho. Uma kungenzeka, vakashela ikhaya lomdlwane wakho ongaba khona. Khumbula ukuthi amaviki ayisishiyagalombili okuqala empilo yanoma yimuphi umdlwane abaluleke kakhulu. Inja engumngane / umbukiso omkhulu iqala lapho izalwa.
Yenza uhlu lwemibuzo ngaphambi kokukhuluma noma ukuvakashela umfuyi. Bheka imvelo yomdlwane. Imidlwane isabela kanjani kubafuyi? Basabela kanjani kuwe? Ingabe indawo yabo ihlanzekile? Buza umfuyi ukuthi ngabe abazali bahlolwe i-dysplasia? Ngabe kube nomlando wokungezwani komzimba nomndeni? Ngabe imidlwane ibikade izungeze izingane? Ngabe bake bazungeza amakati? Ngabe umfuyi uzotholakala ukuphendula imibuzo ngokuzayo? Ingabe umfuyi unikeza inkontileka?
Cishe akunakwenzeka ngomfuyi ukuthi aqinisekise ukuthi impilo yanoma yisiphi isilwane, kepha umfuyi kufanele azimisele ukusibuyisa isilwane asibuyisele! Abafuyi abanomthwalo wemfanelo bavame ukuthi isilwane sibuyiselwe kubo, uma kungasizathu esithile, ungakwazi ukugcina isilwane. Lokhu kubaqinisekisa ukuthi isilwane sizonakekelwa ngokuzayo. Imiphi imigomo enikeziwe? Ngabe imidlwane iye yahlushwa? (izindawo ezahlukahlukene zidinga amazinga ahlukahlukene wesibungu, ngenxa yesimo sezulu.) Lezi yizibonelo nje zeminye yemibuzo okufanele uyibuze.
Uma kungenzeka, hamba ubheke ama-litter amaningana bese ukhuluma nabafuyi abaningi.
Khumbula ukuthi ukhetha umngane iminyaka eminingi ezayo, ngakho-ke zinike isikhathi sakho, uqiniseke ukuthi abakhethi kuphela uhlobo oluhambisanayo, kodwa futhi nesilwane esifanelekayo nomfuyi !! Lindela imibuzo eminingi evela kuzalanisi wakho. Ukhetha futhi umlingani wesilwane lapho kutshalwe khona amahora amaningi othando, umcabango namandla.
Uma uthatha umdlwane wakho, umfuyi wakho angakutshela ishejuli lomdlwane, uhlobo lokudla futhi angancoma ukudla kwangesikhathi esizayo. Ngemuva kwalokho ungashintsha kancane kancane indlela odla ngayo ukuze ivumelane nokuthandayo. Khumbula ukuthi izinguquko ezingazelelwe ekudleni zingaphazamisa kakhulu uhlelo lokugaya umdlwane futhi zidale ukucindezeleka esiswini. I-Airedale ingadla impela, ikakhulukazi njengomdlwane omncane futhi okhula ngokushesha.
Ngemininingwane eyengeziwe yokufunda ukuhlala nomdlwane wakho omusha, bheka i-RPD FAQ enesihloko esithi 'I-New Puppy yakho' ebhalwe nguCindy Moore.
Khumbula ezimeni eziningi, inja endala ingafanelana nesimo sakho kangcono kakhulu kunomdlwane omncane. Abafuyi abaningi babeka imidlwane nezinja ezindala. Lezi zinja zivame 'ukukhombisa amathemba' ezingazange zivuthwe njengoba bekulindelwe noma mhlawumbe zibuyiselwe kumfuyi ngezizathu ezahlukahlukene. (Okuhlangenwe nakho kwami ​​ngokwamukela inja endala kube yimpumelelo enkulu.) Zonke izinhlangano zokutakula izinhlobo zifuna izindlu ezinhle zokutholwa. Izinja zokusindisa zivame ukudinga umsebenzi owengeziwe kepha futhi zingaba nomvuzo omkhulu.
Uma ucabangela injana endala noma inja, sicela ufunde i-RPD FAQ enesihloko esithi 'Inja Yakho Entsha' nayo ebhalwe nguCindy Moore, ukuthola eminye imininingwane.
Khumbula ukuthi ama-Airedales namanye ama-terriers ayizinja ezihlakaniphile futhi ezisebenziseka kalula. Akuzona izinja okufanele zishiyelwe amadivayisi azo. Ungamangala ngobuhlakani babo. U-Airedale oqeqeshiwe angaba ngumngane omkhulu kunabo bonke owake waba nabo. Gcina umoya wakho wokuhlekisa kanye nemithetho engaguquguquki yenja yakho, futhi uzoklonyeliswa nomngane ongenakuqhathaniswa. Kufanele uhlakaniphe, ubekezele futhi uzimisele njengomngani omkhethayo.
Izinkinga Zempilo Jikelele Nezinkinga Ezikhethekile Zezokwelapha
Ama-airedales, ngokuvamile, ayizilwane ezinempilo kakhulu futhi eziqinile. Abanye banezinkinga zempilo, kepha ezimweni eziningi, lezi zincane.
Ama-airedales, njengazo zonke ezinye izinhlobo ezinkulu, anokuvela kwe-hip dysplasia. La macala awavamile kepha kungenzeka ukuthi kubhekwane nalokho okungenzeka. Lapho ukhetha umdlwane, buza njalo umfuyi ngesimo sezinqulu zabazali. Abalimi abaningi banama-x x-ray okuqala enziwa enonyaka ubudala (la ma-x-ray awathunyelwa ngenombolo ye-OFA), ngaphambi kokuqala umsebenzi “wokubonisa”.
Ama-airedales, njengama-terriers amaningi, angaba nesikhumba 'esilumayo'. Lokhu kungaba yisibonakaliso sezinto eziningi. Kwesinye isikhathi akuyona nje inkinga yokudla, futhi kwesinye isikhathi kuyisibonakaliso se-hyperthyroidism noma i-hypothyroidism. Konke okungenhla kungalapheka futhi kulawulwe kalula. Isikhumba 'esinukayo' singabuye sibe uphawu lokungezwani komzimba. Lezi zifo zingaba ukudla noma okunye. Okuhlangenwe nakho kwami ​​kube ukuthi indawo yokuqala ukuqala ngokudla. Amanye ama-Airedales enza kangcono kwiwundlu lekhwalithi nokudla kwelayisi, amanye awakwenzi.
Njalo zinike isikhathi sokugcina izindlebe zakho ze-Airedale zihlanzekile futhi zomile (lokhu kusiza ukuvimbela izifo noma ukucasulwa.), Izinzipho zezinzwani zigundiwe, amazinyo ayahlanzwa (ukwenza lokhu ekhaya njalo kungavimbela isifo sezinsini nezinye izinkinga zamazinyo, futhi kuhle zijwayeze ukuya kudokotela wezilwane.), Futhi khumbula ukugcina izinwele zigundiwe phakathi kwamaphakethe.
Njalo thintana nodokotela wezilwane kanye nomfuyi wakho nganoma yikuphi ukukhathazeka ngempilo.
Ngingabatholaphi abakhiqizi be-Airedale endaweni yangakithi?
I-Airedale Terrier Club of America igcina uhlu lwamalungu. Noma, hlola i-Airedale Rescue Organisation
Kufanele ngikhethe kanjani umfuyi? Yini okufanele ngiyilindele kumfuyi wami?
Ukukhetha umfuyi kubaluleke ngokufana nokukhetha uhlobo noma umdlwane. Kufanele uxhumane nemithombo efana nale ebalwe ngenhla, iya emibukisweni yezinja, noma ukhulume nodokotela bezilwane endaweni. Khuluma nabafuyi abaningi abahlukahlukene ngangokunokwenzeka. Kufanele ukhethe umfuyi ozimisele ukusebenza nawe futhi akusize ukhethe isilwane esifanele wena. Umfuyi wakho kufanele akubuze imibuzo. Kufanele akhathazeke kakhulu ngenhlalakahle yomdlwane obekwe ezandleni zakho. Uma ungavakashela umfuyi, kufanele. Kufanele uqaphele ukuxhumana phakathi komfuyi nezilwane zakhe. Ingabe izilwane zibonakala zijabule, zinakekelwa kahle, futhi zihlanzekile?
Umfuyi omuhle uzokunikeza amarekhodi ezempilo, inzalo futhi, ezimweni eziningi, inkontileka. Iningi lalezi zinkontileka lizobeka okungenani ukuthi:
isilwane sinempilo enhle
isilwane sizogcinwa sinolwazi olusha ngemigomo yokugonywa (nokunye ukukhathazeka ngempilo okunakekelwayo, okusho isibungu senhliziyo, izimuncagazi emathunjini, ukulawulwa kwamazeze, njll.)
yonke imithetho ye-leash yendawo iyalandelwa
isilwane sizobuyiselwa kumfuyi, uma ngasizathu simbe, ungakwazi ukuyigcina inja
isilwane kuzofakwa esinye esikhundleni sazo uma kunezinkinga zezempilo zofuzo ezilulaza isilwane
isilwane sizofuthwa noma sihanjiswe (ngaphandle uma kunesivumelwano esikhethekile; okungukuthi ithemba elingaba khona lombukiso
Abafuyi abaningi bazothengisa imidlwane ngokubhaliswa okulinganiselwe ne-AKC, ngaphandle kwalapho kunesivumelwano esikhethekile. Umfuyi wakho kufanele azenze atholakalele ukuphendula imibuzo futhi azame ukusiza ukuxazulula izinkinga (uma zingavela) ngokuzayo. Njengoba kuphawuliwe ku-ATCA Roster and Information Booklet ka-1998, abalimi abahle bayemukela umthwalo wezinja abazikhiqizayo futhi bazibuyisele emuva uma bedinga usizo, bazihlole kabusha bese bezifaka emakhaya amasha afanelekile. Abazalisi abangenankinga bayahluleka ukufeza lokhu okulindelwe.
Ukubhaliswa Okulinganiselwe, nge-AKC, kusho ukuthi inja ibhalisiwe kepha akukho doti okhiqizwe yileyo nja okufanele ukubhaliswa. Ukubhaliswa okulinganiselwe kusho ukuthi inja kungenzeka ingangenelwa emncintiswaneni wezinhlobo emicimbini enelayisense ye-AKC, kepha ingaqhudelana kweminye imicimbi enelayisense efana neHerding Trials kanye ne-Obedience Test
Ingabe ama-Airedales alungile nezingane?
Njengoba kwenzeka kuzo zonke izinja, izingane nenja kumele zifundiswe ukuhloniphana. Izingane kufanele zifundiswe ukuthi ukuthatha amathoyizi noma ukuhlupha inja ngenkathi idla akuyona imikhuba emihle. Futhi, inja kufanele ifundiswe ukuthi ukweqa abantu noma 'ukukhuluma ngomlomo' akuyona imikhwa eyamukelekayo. Yonke imindeni izoba nemithetho ehlukile (okufanele icatshangwe ngokucophelela ngaphambi kokuthola noma iyiphi inja) okumele idluliselwe ngokucacile nangokungaguquguquki kuwo wonke umuntu (abantu abadala, izingane kanye nenja). Ngokuqeqeshwa okufanele nokubekezela, i-Airedales iyamangalisa ngezingane ezindadlana. Mina, ngokwami, angisoze ngashiya ingane encane nanoma iyiphi inja ihlangene inganakiwe.
Kunconywa kakhulu ukuthi ufune izeluleko zochwepheshe kwezokuqeqesha lapho wethula inja yakho ezinganeni. Kubaluleke kakhulu ukuthi inja igcine isikhundla “senja” ngaphakathi esigungwini sabaphathi ngaphandle kokwehlisa ukubaluleka nezidingo zenja.
Ngabe igceke elibiyelwe 'liyadingeka' ukuba ngumnikazi we-Airedale?
Yize igceke elibiyelwe kungesona isidingo sokuba ne-Airedale, kuyinto enkulu kakhulu! Ngaphambi kokuletha inja endlini yakho, kufanele ucabangele ukuthi uzokwenzani ngezinsuku lapho uyagula, wephuza ukufika, noma ngenxa yesizathu esithile ungakwazi ukuhamba nenja. Izindawo eziningi zinohlobo oluthile lomthetho we-leash futhi, ngempilo yenja, akufanele neze uvumele inja ukuthi igijime ngokukhululeka, ngaphandle kohlobo oluthile lwemingcele. Khumbula ukuthi ama-Airedales afuyelwa ukuzingela kanye ne-terriers, ngokuvamile, izosukela 'izidalwa ezinoboya' ngokulahla ngokunganaki ukuzijabulisa.
Ngabe kuyiqiniso ukuthi ama-Airedales alungele abantu abanezifo zomzimba?
Yize kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi abaphikisana nezinye izinhlobo zezinhlobo kubonakala sengathi banezinkinga ezimbalwa zokuphila ne-Airedales, iqiniso lokuthi une-allergies akusona isizathu esanele sokuthola i-Airedale. Ungeza ilungu lomndeni wakho futhi kufanele ucabangele ubumnene, usayizi, uhlelo lwakho nezinye izinto eziningi lapho ukhetha isilwane. Kunezinye izinhlobo, (ngokwesibonelo; ama-Poodle) nazo ezithi “azwani ne-aleji”, ezingakufanela kangcono nezakho.
Ngabe ama-Airedales amadala avumelana nezimo ezintsha? Ngabe ukutakula noma inja endala kuyisinqumo esihle kimi?
Ama-airedales avumelana nezimo ezintsha. Njengezilwane eziningi, ziphendula kahle ezimeni zothando nezakhiwe. Izinja ezindala kwesinye isikhathi ziyafiseleka ngesimo esithile kunemidlwane. Isibonelo esisodwa ngumndeni noma umuntu ongafuni ukubhekana nokugqekezelwa kwemidlwane. Mhlawumbe usukhulile kancane futhi ufuna ubudlelwano nenja kepha hhayi amandla ombundane. Kuthiwani uma ungumuntu ogijimayo futhi ufuna umlingani? (Akunconyelwa ukuthi umdlwane osemncane ugijime!) Kunezimo eziningi lapho isilwane esidala singangena kangcono ekhaya lakho.
Izilwane ezindala zingabandakanya ukuhlengwa (nganoma yisiphi isizathu) noma izilwane ezindala umfuyi angafisa ukuzibeka ekhaya elihle. Njalo thola isizinda esiningi esilwaneni ngangokunokwenzeka. Imininingwane yezokwelapha kufanele inikezwe. Uma ucabanga ukuthi isilwane esidala singcono kuwe, kufanele futhi ubheke “ukuqeqeshwa kabusha” okungadingeka. Kuncike esimweni lapho isilwane sivela kulokhu kungahluka kusuka ekugqekezelweni indlu nasekufundiseni isilwane ukuthi noma bekufanelekile ukulala kusofa endlini endala, imithetho elapha, embhedeni wezinja phambi kweziko. Omunye umfuyi wasikisela ukuthi indlela enhle uma ubhekene nesilwane esidala ukuyiphatha njengomdlwane, uthathe ngokuthi akazi lutho futhi umyeke athole inkululeko yabo.
Ngabe kufanele 'ngiqeqeshe ikreate' i-Airedale yami?
Ngokubona kwami, ukuqeqeshwa kwekreyithi kuyinhlanganisela ethile. Akufanele isetshenziselwe ukuthatha indawo yokuqeqesha i-Airedale yakho ukuba nemikhuba emihle futhi iphile ngemithetho yasekhaya kepha njengendawo ephephile nenethezekile lapho isilwane sakho siphumula khona. Kuyindlela ephephile futhi nenja yakho ukuhamba. Ukufundisa inja yakho ukuthi ikesi lakhe yisikhala sayo kungasiza kakhulu lapho inkampani ifika, lapho iphulwa indlu, futhi uma isilwane sakho kufanele sivalelwe izizathu zezokwelapha. Ngikutholile ukuba nenja eyangenela ukuhlinzwa okukhulu futhi kwadingeka ibuyiselwe ekhaya kusenesikhathi, ngoba 'yayiphuma ikhefu' lapho ivalelwe. Nganquma ngaleso sikhathi ukuthi angisoze ngaba nesinye isilwane esingaqeqeshiwe ikreyiti.
yini ingquza yami exutshwe
yiziphi izinhlobo zezinja ezinamajazi ama-brindle
ibhungane elincane kunazo zonke emhlabeni
amagama wesilisa husky nezincazelo